BARO: 5-ta Ciyaartoy ee Beddelka u Noqon kara Cristiano Ronaldo, kuwaas oo Real Madrid ay Durba la Xiriirtay
Wednesday, January 23rd, 2019 - 21:20:40
Wednesday July 11, 2018 - 12:21:55 in Wararka by Muuse Cabdi
Laacibka 33-jirka ah ee dalka Portugal ayaa heshiis la gaaray kooxda horyaalka Talyaaniga heysata ee Juventus.
Laacibkan oo ku sugnaa garoonka Bernabeu tan iyo 2009-kii markaas oo uu uga soo dhaqaaqay Manchester United xilli lagu soo qaatay lacagtii waqtigaas ugu badneyd ee laacib lagu gato oo aheyd £80milyan oo Gani, ayaa hadda suuqa kala iibsiga mar kale isagoo qaali ah lagula wareegay.
Ronaldo wuxuu dhaliyay 44 gool 44 kulan oo uu ciyaaray Xagaagii hore, wuxuu sidoo kale Caawiyay 8 gool, 4 kalena wuxuu u dhaliyay xulka Portugal tartankii Koobka Dunida ee Russia – waxaana ka mid ahaa 3-leey uu ka dhaliyay Qaranka Spain.
Haddaba, keddib Dhaqaaqista Laacibkan, waxaa la filayaa in suuqa kala iibsiga ay Gasho Real, iyadoo keeneysa 5 ciyaartoy Midkood.
Da’yarka dalka Faransiiska ayaa ka mid ah diiwaanka sare ee kooxda Madrid xiddigaha ay dooneyso. Mbappe wuxuu ku biiray Paris St Germain isagoo amaah looga qaatay Monaco bishii August Sanadkii hore, waxaana jira heshiis £162milyan uu ugu biiray kooxdaas, heshiiskiisana waa la joogteeyay Xagaagan. Wiilkan oo 19-jir ah ayaa dhaliyay 33 gool wuxuuna saftay 48 kulan xagaagii dhammaaday waana da’yarkii ugu horreeyay ee nuuciisa ah oo Goolal 2 ah hal kulan ka dhaliya ciyaaraha Koobka Adduunka tan iyo Pele Sanadkii 1958-kii. Bandhiggiisa ayaa meesha ka saaray waxqabadkii markii ay dhallinta yaraayeen ee xiddigaha Thierry Henry iyo Michael Owen.
Laacibka xulka Belgium iyo kooxda Chelsea ee dhinac weerarka ka ciyaara ayaa waxaa Talaadadii laga ciribtiray Koobka Dunida, wuxuuna ka dhaliyay koobkan 2 gool Laba Kalena waa uu Caawiyay. Xiddiggaan oo 27-jir ah ayaa ka mid ah Beddellada waqtiga dheer loo raadinayay booska Ronaldo, waxaana laga warqabaa in 17 uu u dhaliyay kooxdiisa Blues Sanadkii dhammaaday, balse wuu ka caawinaad badnaa laacibka Portuguese-ka u dhashay, wuxuuna caawiyay 13. Wuxuu sidoo kale kasbaday Kalsoonida macallinka Qaranka Roberto Martinez waxaana loo xiray Sumadda Kabtanka. Hazard wuxuu markan wacdaro ka dhigi karaa Champions League haddii uu aado Real, in kastoo Chelsea haddii uu sii joogo uusan ciyaari doonin, sababtoo ah Sanadkii hore waxay ku dhammeysatay kaalinta 5aad ee kala horreynta.
Ciyaaryahanka ugu qaalisan kubadda Cagta dunida, oo ka tegay Barcelona kuna Biiray Paris St Germain waxaa lagu iibsaday £199.8milyan, wuxuu u muuqdaa mid aadi kara Real, Neymar, waa 26-jir, dhaliyay 28 kulamo 30 oo uu safnaa Sanadkiisii koobaad ee horyaalka France wuxuuna caawiyay 16 gool oo kale. Wiilkan xulka Brazil u ciyaaray, 2 gool ayuu u dhaliyay qarankiisa Koobka Dunida waxaana horayba uu ugu diiwaan gashanaa Madrid bishii January, balse wuxuu laacibku mar sheegay inuu ku Faraxsanyahay kooxda ka dhisan horyaalka Faransiiska.
In kastoo ay warar sheegayaan inuu sii joogayo Atletico Madrid haddana Telefeshin lagu magacaabo ‘La Decision’, ayaa sheegaya in Weeraryahanka Faransiiska uu aadayo Real Madrid. Griezmann, ayaa dhowaanahan lala xiriirinayay Barcelona, wuxuuna dhaliyay 29 gool 49 kulan oo uu safka usoo galay Atletico xagaagii dhammaaday, isagoo caawiyay 15 gool oo kale. Waa 27-jir xulka Faransiiska u dhaliyay 3 gool kulamadii Koobka Adduunka Russia 2018.
Lewandowski ayaa dhhigay Rikoodh Cusub oo Yurub dhankeeda ah, markii uu 16 gool ka dhaliyay is reereebka Koobka Adduunka ee dalka Russia, wuxuuna goolal dhalinayay 9 ka mid ah 10-ka kulan ee xulka Poland ay ciyaareen. Xiddiggaan oo 29-jir ah ayaa ah laacin Shabaqa Deris la ah, Bundesliga ayuuna qaaday 3 mar gooldhalintiisa tan iyo 2013. Wuxuu dhaliyay 30 oo horyaalka ah mid kasta oo ka mid ah 2-dii Sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii uu Jarmalka tegay 2010-kiina, wuxuu ku tirsanaa Xiddigaha ugu gooldhalinta Fiican. Lewandowski wuxuu ku jiraa Safka Bayern Munich Tan iyo 2014 markaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Xifaaltanku kala dhexeeyo ee Borussia Dortmund wuxuuna dhaliyay 151 kulamo gaaraya 195 kulan oo uu u ciyaaray kooxdan 4-ta Sano ee uu la shaqeynayo.